पोग्बाको मूल्य १ सय ५० मिलियन पाउण्ड !
मुख्य पृष्ठखेलकुद फुटबलपोग्बाको मूल्य १ सय ५० मिलियन पाउण्ड !
एजेन्सी, १९ पुस । इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेडले आफ्ना स्टार पल पोग्बाको मूल्य तय गरेको छ । युनाइटेडले फ्रेन्च स्टार पोग्बाको जनवरी ट्रान्फरका लागि मूल्य तय गरेको अन्तार्राष्ट्रिय मिडियाहरूले जनाएका छन् ।
पछिल्लो समय इटालियन क्लबद्वय युभेन्टस र इन्टर मिलानका साथै स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडसँग जोडिएका पोग्बाको मूल्य युनाइटेडले १ सय ५० मिलियन पाउण्ड तोकेको छ । ‘द एक्सप्रेस’को रिपोर्टअनुसार यस पोग्बाका लागि युनाइटेडको कीर्तिमानी मूल्य तोकेको हो । यस महिना पोग्बा किन्न चाहने क्लबले १ सय ५० मिलियन पाउण्ड तिर्नुपर्ने द एक्सप्रेसले जनाएको छ ।
हाल उनी घाइते अवस्थामा छन् । फ्रान्सलाई रसिया विश्वकप जिताउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका पोग्बा घाइते अवस्थानमा रहँदा पनि म्यानचेस्टर युनाइटेड छाड्ने मनसायमा रहेको चर्चा चलिरहेको छ । उनलाई रियलले आफ्नो टार्गेटमा राखेको छ ।
यस्तै युभेन्टसले पनि उनलाई फर्काउन चाहेको बताइन्छ । २६ वर्षीय पोग्बा २०१६ मा मात्र युभेन्टसबाट युनाइटेड आएका हुन् । ४ वर्ष युभेन्टसबाट खेल्दै युनाइटेड गएका फेरि इटाली फर्किने मनसायमा रहेको बताइन्छ ।